Nhare dzeHuawei dzakanakisisa dzaunogona kutenga izvozvi
Heano ndiyo mafoni emuHuawei akakurumbira iwe unogona kutenga mu2017. Kubva pane zvigadzirwa zvebhajimenti seHome 9 neHuawei P10 Lite 2017 kusvika kune yepamusoro yepamusoro-faira dzemakambani seP10, kuvhara makamera emakera uye maitiro anokosha, aya ndiwo mafoni edu anonyanya kufarira Huawei ikozvino.
Chinese chinorema Huawei inonetsa kupomera Samsung neApple kana zvasvika kune mobile tech, kugadzira mamwe echokwadi akanaka smartphones.
Kubatana kwaHuawei nehunyanzvi hwekamera Leica zvinoreva kuti iwe unogona kutarisira mamwe mabhenefiti emagetsi pamafoni ayo ekumusoro-soro, kusanganisira maviri-lens makamera akazara neakajeka maficha uye anotora zvisingaite ruzivo. Zvichakadaro zvigadzirwa zveHuawei 'Honor' zvinopa hukuru hukuru uye maficha pamutengo unodhura unodhura.
Heino sarudzo yedu yeakanakisa mafoni eHuawei aunogona kutenga izvozvi mu2017, pamwe nekunyepedzera kutarisa kune chero anouya mafoni.
Best Huawei foni: Huawei P10 Plus
Ongororo Yedu: Huawei P10 Plus kudzokorora
Huawei inonyanya kupa runhare inopa izvozvi P10 Plus, chikara chemufuridzi kurongedza mamwe akasimba akasimba mafekiti.
Kutanga, iyi minara ye5.5-inch foni pamusoro peiyo 5.1-inch PCHNUMX, pachinenge ichiri kutakura zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoshamisa zvezvigadzirwa. Izvozvo zvinoreva kuti unokwanisa kuwana zvakananga-zvakatemwa zvakagadzirwa nemhando, chidimbu checaramic version uye yese yezvisarudzo zvakasiyana-siyana zvevaravara, kusanganisira yakaisvonaka yegorosi.
IP10 Plus inofarirawo zvinyorwa zvatsvaga, kusanganisira zvimwe RAM, yakavandudzwa Summilux kamera uye yakakura-yakakosha Quad HD screen. Mune mamwe mazwi, P10 Plus yakasimba zvakasimba foni foni munyaya dzose, kunyange ikasava nekutsigira kweHRR uye kudzivirira mvura yevadzivisi saiye LG G6 uye Galaxy S8.
Check out kwedu P10 Plus vs P10 vs P10 Lite kuongorora kuongorora kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pokuti mashandiro aya eHuawei matsva anowanikwa sei maererano nemafungiro nemaitiro.
Best Huawei foni: Huawei P10
Ongororo Yedu: Huawei P10 kuongorora
Ikozvino foni yeHuawei inowanikwa foni ndiyo yakazara yeHuawei P10, yakasimba ye 5.1-inch mobile iyo inofadza kushanda nayo yakaenzana nekuenzaniswa nemamwe mavara emagetsi.
Iine curvy yayo uye compact dhizaini, iyo P10 inoitirwa yekushandisa-ruoko-ruoko. Iwe unowana sarudzo yakasimba yeanonakidza dhizaini uye mavara kuti usarudze pakati, kusanganisira inoyevedza nyowani nyowani mhando. Uye sezvaungatarisira, kuita kwakanyanyisa kunaka nekuda kweiyo Kirin 960 processor yeHuawei dhizaini.
Icho Chizere HD IPS skrini ine mavara uye inofadza inopinza, inotambanudzira kumucheto chaiko kweiyo P10 yesimbi furemu. Uye nepo hupenyu hwebhatiri huchipera mumaawa makumi maviri nemana, iyo yekukurumidza-kuchaja tech zvinoreva kuti wakanaka kuenda zvekare pasina kana nguva zvachose.
Pakupedzisira, iyo itsva uye yakavandudzwa yaviri-lens Leica kamera ndiyo mhuka. Iwe unogona kutora shotshu dzinoshamisa mumamiriro ezvinhu akawanda, pamwe nemamwe maitiro akanaka ebhokeh nekuda kwechipiri monochrome lens. Uye iwe unogonawo kupfura vhidhiyo kusvika kusarudzo ye 4K. Tarisa yedu zvakadzika P10 kamera kuongorora kune mamwe mashoko uye samples.
Kwidziridzo: Isu tapedza mwedzi mishanu neHuawei P10 ikozvino; tsvaga kuti inosimudza sei pamusoro penguva mukudzika kwedu P10 refu-kuongorora.
Best Huawei foni: Honor 9
Ongororo Yedu: Kudza 9 kuongorora
Iyo Honor brand yakagadzirwa naHuawei inoenderera mberi nekupa yakasimba tech pamutengo-wakakura-mutengo, nekuburitswa kwekupenya Honor 9. Muchokwadi, tarisa kune iyi handset's specs uye iwe unenge waregererwa nekuvhiringidza iyo neHuawei P10. Izvo zvinoita kuti nharembozha iyi ibvunze kunyange kutonyanya kushamisika. Nekuti P10 ichiri kukuisa pamusoro pe £ 550 SIM-yemahara pakati-2017, iyo Honor 9 inotengeswa pamutengo we- $ 380 chete.
Muchokwadi, iyo Honor 9 yakachipa zvakanyanya kupfuura mutsiva wayo mukuru iye zvino, iyo OnePlus 5- iyo zvakare inopa premium specs kune yakaderera mari pane mamwe mareza handsets.
Iyo Honor 9 hapana mubvunzo kuti yakakosha-kukosha ruoko uye rwakasimba rwekutenderera-ruzivo. Chokwadi, iwe hautore chero jazzy HDR inoonekwa kana inosekesa yakapinza Quad HD skrini - uye vazhinji vashandisi havatozozviona. Vachagutsikana zvakanyanya neyakajeka software, inodiwa dhizaini, kuita kwakatsetseka uye hwakavimbika hupenyu hwebhatiri. Kunze kwekukanganisa kwemakera kamera uye kutsigirwa kwakasimba, isu hatigone kuwana zvakawanda zvekushoropodza pano.
Best Huawei foni: Honor 8
Ongororo Yedu: Kudza 8 kuongorora
Kudzoka mu2014, Huawei yakatanga mutambo wayo weruremekedzo uyo wakagadzirirwa kupa zvinonzwisisika-specced mafoni ekugadzirisa mari yekugadzirisa mutengo. Chimwe chezvinhu zvakakura zvikuru kubvira pakatanga iChemekedzo 8 inoshamisa, iyo inopa mhando yakakosha, kushanda kwakasimba uye zvinhu zvakawanda zvinotapira seminwe yepinja yepakati pe £ 300.
Iyo inopenya furemu inokwezva uye zvinoshamisa kuti yakasimba, ichitsungirira neyakaenzana zvishoma yekurovera uye kukwenya. Isu tinonyatsoda iyo 5.2-inch Yakazara HD inoratidzira, iyo inopomba punchy mavara uye anopinza anoonekwa, ine yakasimba yakasimba kupenya. Uye seHuawei's P9 mureza, iyo Honor 8 inouya ichirongedza yakasimba-mbiri-lens kamera kumashure kwekupedzisira.
Tichifunga nezvemutengo wakaderera, Huremekedzi 8 inopesana zvakanyanya kune zvinodiwa zve OnePlus 3 uye mamwe pakati-siyana anoshamisa.
Best Huawei foni: Honor 8 Pro
Ongororo Yedu: Kudza 8 Pro kuongorora
Iyo mureza Kudza foni izvozvi ndiyo Honor 8 Pro. Iyi ndiyo ruoko runodhura kwazvo pasi peiyo Honor brand, asi iyo 8 Pro ichiri kupa kukosha kwakasimba kwemari. Mushure mezvose, kunze kwekugadzirwa uye tekinoroji yekamera, iyi ingangoita isingadhuri vhezheni yeHuawei P10 Plus - ruoko rune nyama ine nyama inozvirumbidza Quad HD skrini, premium performance uye kunyange hupenyu huri nani hwebhatiri kweinenge £ 150 zvishoma.
Kusiyana neiyo compact compact Honor 8, iyo Pro modhi ine nyama ine 5.7-inch smartphone. Ichokwadi ndechimwe chevadi venhau, nepo Honor achiitirawo chero munhu anofarira VR. Bhokisi raRukudzo 8 Pro rinonyatso shanduka rikaita Google Kadhibhodhi-dhizaini seti yemagirazi echokwadi, kuti unakirwe nemavhidhiyo eVR nemitambo nayo.
Best Huawei foni: Huawei P9
Ongororo Yedu: Huawei P9 kuongorora
Huawei's hombe 2016 mureza foni ichiri imwe yeakanakisa nharembozha kusvika parinhasi, ichizvikudza premium specs uye yakanakisa kamera chiitiko. Mazuva ano iwe unogona kuinhonga kweinosvika mazana mana emadhora mazana mana zvakare, saka haina kudhura zvakanyanya kune yepamusoro-ye-iyo-renhare nhare.
Iyo Huawei P9 inotema yakanaka simbi furemu inoyevedza zvine mutsindo uye yakapfava, tichifunga kuti yakawanda sei inopinza mukati. Iyo yakajeka 5.2-inch Yakazara HD skrini yakanyatso nyoro uye inogadziriswa senge maP10's, nepo iwe uchiwanawo zvakakomba hupenyu hwakareba hwebhatiri uye kuita kwakasimba .
Asi nyeredzi chaiyo yezviratidzwa pano ndeyekuti vaviri-lens rekare kamera, yakabudiswa pamwe nekubatana ne optics firm Leica. Izvo zviviri mapirosi anoshanda pamwechete kuti abudise zvakakosha, mapikicha akazara, akazadzwa nemamwe sexy bokeh.
Kana zvikumbiro zvako zvakakwirira, Huawei P9 inofanirwa kuasangana navo.
Best Huawei foni: Huawei P9 Plus
Price: £ 579
Ongororo Yedu: Huawei P9 Plus kudzokorora
Kana 5.2-inches inoita kunge isina kusimba, tarisa Huawei's P9 Plus pachinzvimbo. Iyi 5.5-inch handset inguva hombe vhezheni yeHuawei P9, inorongedza yakawanda yezvinhu zvakafanana. Kuita kwacho zvakare kwakapfava, hupenyu hwebhatiri hwakasimba zvakanyanya uye iwe unowana iwo maviri maviri-lens Leica kamera yeHuawei P9.
Kana uchida kuona kuti musiyano uripi pakati peHuawei P9 uye Huawei P9 Plus, pamwe chete nekodhi-cut price-Huawei P9 Lite, tarisa zvakazara Huawei P9 kuenzanisa.
Best Huawei foni: Huawei Mate 9
Ongororo Yedu: Huawei Mate 9 kuongorora
Huawei Mate Mate handsets ndiwo mafoni ekutanga e-premium phablet akavakirwa kune avo vanoda kufanana nemasikirwo emakona. Ikozvino shanduro ndiyo inofadza zvikuru Huawei Mate 9, yakatangwa pamagumo e2016, uye takaipa yakakodzera nyeredzi ina nehafu pakuongorora kwedu kwakakwana.
Mufaro 9 ane zvakawanda zvekutanga. Yaiva yekutanga foni yaizouya ikatakura mushandi weKirin 960 weHuawei, somuenzaniso, unovakirwa pakugumira kwekupedzisira. Yaivawo yekutanga foni yekutakura itsva itsva EMUI 5.0 launcher, uye wechipiri wechiHuawei wechipiri-lens Leica kamera. Ndeipi kamera zvakare.
Chinhu mukuita kwakatsetseka uye hunonakidza hupenyu hwebhatiri uye iyo Mate 9 inopa inodhura asi premium smartphone ruzivo izvo zvakaoma kukanganisa - chero bedzi iwe usinei neanopisa blower.
Best Huawei foni: Huawei Mate 8
Ongororo Yedu: Huawei Mate 8 kuongorora
Huawei ane simba 6-inch Mate 8 ndiye akatungamira kune akanakisa Mate 9, ichipa vateveri vezvenhau kurapwa chaiko pamutengo unodhura zvino.
Kunyangwe iyo Mate 8's yakakura kwazvo skrini ingori Yakazara HD pane Quad HD, zvinoonekwa zvichiri kupenya pamwe nekupenya uye iwe unowana chaiyo ruvara kubereka futi. Nezvinoshanda, iwe unogona kubaya mu microSD memory kadhi kuti uwedzere iyo nzvimbo yekuchengetera, yekutakura kutenderera kwakakura midhiya muunganidzwa.
Iyo Huawei Mate 8 haisi yekungodzosera kumashure nemafirimu pakufamba, zvakadaro. Huawei's Emotion UI yakamisikidzwa ine inonakidza maficha uye iwe unowana inokwanisa 16-megapixel yekumashure kamera yekubvuta zvakakukomberedza. Performance nehupenyu hwebhatiri zvakare zvakanakisa, zvichiita ichi chakasimba chese-kutenderera smartphone kana iwe uri mushure mehombe skrini.
Nhare dzepamusoro dzeHuawei: Huawei P10 Lite
Release Date: Dai 2017
Ongororo Yedu: Huawei P10 Lite kuongorora
Iyi yepakati-renhare foni ingangoita hafu yemutengo wepakutanga Huawei P10 nhare, zvakadaro ichiri kupa imwechete yakatsiga uye inoratidzira-yakazara Emotion UI pamwe nezvimwe zvakanaka zvinoremekedzwa, zvemutengo uri nani wekubvunza. Izvo zvakati, iyo P10 Lite inoshandurawo maHuawei's aesthetics uye zviyero kudzokera kune imwe chete kamera kamera, zvichienzaniswa neanomira-mbiri-lens snapper.
Iyo P10 Lite yakavakwa zvakanaka, inopa ruzivo rwakakura rwevashandisi uye inoita zvakanaka nezvekushandisa kwemazuva ese. Kamera yaro yakavimbika kunyangwe isiri yakasimba sevamwe varovedzi. Muchokwadi, iyo £ 299 mutengo weti teki inoisa iyi handset mukati mekupfura huwandu hwakanakisa Moto G5 Plus; foni hombe, yekubhuroka chokwadi, asi imwe inogona kutora uye kutopfuura iyo P10 Lite mune dzimwe nzvimbo, nekuda kushoma.
Best Huawei foni: Huawei P8 Lite 2017
Ongororo Yedu: Huawei P8 Lite 2017 kuongorora
Huawei yokutanga foni yepamusoro yegore ndiyo yakashandurwa shanduro yekare yeP8 Lite, uye nokuda kwe £ 185 chete muUk inonyanya kukwikwidza zvakasimba kune mamwe mabhizimusi anotsvaga.
Iyi 5.2-inch foni inotodhura kupfuura iyo yakanaka Kudza 6X, asi ichiri kuputika mune zvimwe zvakasimba. Iwe unowana chinyorwa che Full HD, shanduro yezvino yeIndaneti uye mitoro yebhonasi yeHuawei, unopa kukosha kwekuda mari.
Huawei akashandura chiitiko chakasimba mumushandi munharaunda dzose, akaputirwa mune imwe hardware yakashata. Pamutengo uyu, ndezvipi zvimwe zvaungabvunza?
Best Huawei foni: Nexus 6P
Ongororo Yedu: Nexus 6P kudzokorora
Kunyangwe yakarongedzwa neGoogle branding, iyo Nexus 6P yakanyatsogadzirwa neHuawei uye ndiyo foni yedu yeHuawei ya2015.
Iyo hombe yefoni nyowani dzeGoogle dzeNexus, iyo Nexus 6P mitambo yako yakajairwa simbi-dhizaini dhizaini, izere nekanakisa kamera bhawa uye inzwa yeminwe yekuminwe kumashure. Icho chidiki chechitsama asi nekutenda kune yakakura 5.7-inch skrini, hongu, asi zvakadaro haina kukura seHuawei Mate 8.
Iyo Quad HD inoratidzira inokatyamadza, inogadzira zvisingaenzaniswi zvakadzama zvinoonekwa izvo zvinofadza vateveri vezvenhau uye wese munhu wese anotarisa kunaka kwaro. Zvinosuruvarisa kuti hapana rutsigiro rwe MicroSD, saka uchafanirwa kutarisa kune dzimwe nzira dzekuwedzera kumwe kuchengetedza.
Sezvo nemafuta mazhinji eHuawei, 12.3-megapixel seri ikamera inofadza. Iwe unogona kupfura kusvika kumavhidhiyo ekugadzirisa kweC4K uye yako inobhururuka ichaita yakajeka munenge chero mamiriro ezvinhu.
Nhare dzakanakisa dzeHuawei muna 2017
Huawei Mate 40 Pro: Zvese zvatinoziva kusvika parizvino uye zvatiri kuda kuona (Kwidziridzo)
Huawei P10 Yenguva Yakareba Ongororo: Iyo P10 yatove kushanda?
Huawei P10 Plus Ongororo: Mukudzika
Huawei Mate X2 maoko-on: Zvino izvi ndizvo
Huawei P40 uye P40 Pro: Zuva rekuburitsa, runyerekupe uye mahumu
Huawei P10 vs pasi: Tinofananidza P10 neGalaxy S7, Google Pixel nedzimwe Android dzakanakisisa